यसकारण २ गुणाले बढ्यो अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > यसकारण २ गुणाले बढ्यो अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा !
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म गत वर्षभन्दा २ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ ।
मंगलवार सार्वजनिक कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष रू. ६ करोड ८० लाख ५३ हजार खुद नाफा गरेको हो । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. ३ करोड ३६ लाख ८२ हजार थियो ।
यस वर्ष विद्युत विक्रीबाट गत वर्षभन्दा कम आम्दानी गरेपनि सञ्चालन नााफा बढेकाले कम्पनीको खुद नाफामा वृद्धि भएको हो । गत वर्ष रू. ४ करोड ७ लाख ६ हजार विद्युत विक्रीबाट आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ३ करोड ४ लाख ३३ हजार मात्र यो आम्दानी गरेको छ । अन्य शीर्षकबाट भने कम्पनीको आम्दानी यो वर्ष बढेको छ ।
गत वर्ष रू. १ करोड ९३ लाख ८७ हजार अन्य शीर्षकबाट आम्दानी गरेको यो कम्पनीले यस वर्ष रू. ६ करोड ५३ लाख ९ हजार आम्दानी गरेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा बढ्न टेवा मिलेको छ । गत वर्ष रू. ५ करोड ४ लाख ३३ हजार सञ्चालन मुनाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ८ करोड ७९ लाख ४१ हजार गरेको छ ।
७ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी बढाएर रू. ९९ करोड ८३ लाख २३ हजार पु¥याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि ३० दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर रू. १४ करोड ४३ लाख ६५ हजार पुगेको छ । गत वर्षसम्म कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९३ करोड ३० लाख १२ हजार र जगेडा कोष रकम रू. ११ करोड ६ लाख ९१ हजार थियो । यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ७७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११४ दशमलव ४६ रहेको छ ।
२०७७ माघ १३ गते ०९:४६ मा प्रकाशित
‘एक पालिका: एक खेलमैदान’ बनाउन प्रदेश सरकारद्वारा बजेट विनियोजन
१२ करोड ९७ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सुचिकृत, हेर्नुहोस् ! कसको कति ? (सूचिसहित)
लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाले निकाल्यो यस्तो सूचना
पत्रकार ढकालको उपचारको लागि २२ हजार सहयोग
एनआइसी एशियाले दियो घातक रोगको बीमावापत १५ लाख